Falling PaOh Flag 2.1 APK Download - Android Tools Apps
APK Downloader Apps Tools Falling PaOh Flag 2.1
Falling PaOh Flag 2.1 APK
2.1 / June 11, 2016
App Information Falling PaOh Flag
HsiHseng,140104,South Shan State,Myanmar(Burma)
PaOh IT Youth Show More...
Hsi Hseng(iFont) 1.0 APK
"Hsi Hseng" is Myanmar Unicode Font.This font is supported which is many ethnic language inMyanmar.Such as Myanmar, Shan, PaOh, Karen, Mon, Kayah, Palaung and manymore.Hsi Hseng(iFont) for Samsung (No Root)How to use.*************1. Install Hsi Hseng(iFont)2. Go to Phone Setting > Display > Font Style >Choose Hsi Hseng(iFont)3.Enjoy!Hsi Hseng Font For MIUI*********************1.Go to System font2.Search Hsi Hseng3.Download & Apply4Enjoy!Hsi Hseng Font For iOS*********************1.Click Link URL> http://bit.ly/HsiHseng4iOS2.Open With Safari Browser3.Click Install4.Enjoy!You Can Get TTF Version For Computer & Other OS. DownloadHere >>> http://bit.ly/HsiHseng4TTFCan Feedback Any Problem...Website: www.paohityouth.comFacebook Page: www.facebook.com/PaOhITYouthFacebook Group: www.facebook.com/groups/PaOhUnicodewww.facebook.com/groups/mmUnicode
Hopone(iFont) 1.0 APK
"Hopone" is Myanmar Unicode Font.This font is supported which is many ethnic language inMyanmar.Such as Myanmar, Shan, PaOh, Karen, Mon, Kayah, Palaung and manymore.Hopone(iFont) for Samsung (No Root)How to use.*************1. Install Hopone(iFont)2. Go to Phone Setting > Display > Font Style >Choose Hopone(iFont)3.Enjoy!Hopone Font For MIUI*********************1.Go to System font2.Search Hopong3.Download & Apply4Enjoy!Hopone Font For iOS*********************1.Click Link URL> http://bit.ly/Hopone4iOS2.Open With Safari Browser3.Click Install4.Enjoy!You Can Get TTF Version For Computer & Other OS. DownloadHere >>> http://bit.ly/Hopone4TTFCan Feedback Any Problem...Website: www.paohityouth.comFacebook Page: www.facebook.com/PaOhITYouthFacebook Group: www.facebook.com/groups/PaOhUnicodewww.facebook.com/groups/mmUnicode
Padauk Grand Pro(iFont) 1.1 1.1 APK
Padauk Grand Pro ဖောင့်သည် ယူနီကုဒ်စံကိုလိုက်နာထားသော မြန်မာဖောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်များတွင်မြန်မာ၊ ပအိုဝ်း၊ သျှမ်း၊ ကရင်၊ ကယား၊ မွန်၊နှင့်အခြားမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားစာပေများပါဝင်ပါသည်။Padauk Grand Pro ဖောင့်တွင်လည်းအခြားမြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်များကဲ့သို့ မြန်မာစာအပြင်တိုင်းရင်းသားစာပေများလည်းပါဝင်ပါသည်။Android ဖုန်းဗားရှင်း 4.3 အထက်များတွင် မြန်မာစာ၊ ကရင်စာ၊ပအိုဝ်းစာနှင့်အခြားစာများတို့တွင်ဖြစ်တတ်သောစာလုံးပူးခြင်းပြဿနာများကို ယခု Padauk Grand Proဖောင့်တွင်ဖြေရှင်းပေးထားပါသည်။အခြားလိုအပ်ချက်များကို ဗားရှင်းအသစ်များတွင်ထပ်မံဖြည့်စွတ်ပေးသွားပါမည်။ပိတောက်ဖောင့်ကိုအခြေခံထားပြီးပြုပြင်ရေးသားထားပါသည်။မူရင်းပိတောက်ဖောင့်ရေးသားသူကို Credit ပေးပါတယ်။ကွန်ပျူတာနှင့်အခြားနေရာတွေမှာသုံးဖို့ ttfဗားရှင်းအနေနဲ့ရယူလိုပါက အောက်ပါလင်ခ်ကနေ သွားရောက်ရယူနိုင်ပါသည်>>> http://j.mp/PadaukGrandProTtfApple စက်တွေအတွက် Font Profile အနေနဲ့ရယူလိုပါက အောက်ပါလင်ခ်ကိုSafari Browser ဖြင့်ဖွင့်ပြီးရယူနိုင်ပါတယ် >>> http://bit.ly/PadaukGrandProMobileconfigလိုအပ်ချက်များ အကြံပြုလိုသည့်အချက်များကိုအောက်ပါနေရာများသို့လာရောက်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။★ Facebook Groups ★=============Myanmar Unicode Area>>>https://www.facebook.com/groups/mmUnicode<<<Myanmar PaOh Unicode Area>>>https://www.facebook.com/groups/PaOhUnicode<<<ပအိုဝ် IT လူငယ်များ>>>https://www.facebook.com/groups/KhunHtetzNaing<<<★ Facebook Page ★============ပအိုဝ်း IT လူငယ်များ>>>https://www.facebook.com/PaOhITYouth<<<★ Blog ★======ပအိုဝ်း IT လူငယ်များ>>>https://www.PaOhITYouth.blogspot.com<<<★ အားလုံးအဆင်ပြေပျော်ရွင်နိုင်ကြပါစေ ★
Myanmar All SIM Card Register! 1.6 APK
Myanmar All Sim Register App!Registration you sim Free with this app.You can register all Myanmar sim Card, MPT, Telenor,Ooredoo,MecTel.Very simple useful App.You can Feedback anythingIf you have any problem in this app Please contact me.==================@>>> Facebook <<<@==================https://www.facebook.com/Khun.Htetz.Naing==================@>>> Email <<<@==================khunhtetznaing@gmail.comPlease Invite your friends For Register Their SIM Cards withThisApp!Thanks For Using My App.////////////////////////////////(Myanmar Zawgyi Font)မိမိတို႔ရဲ့ဆင္းမ္ကဒ္မ်ားကိုအြန္လိုင္းကေနအလြယ္တကူမွတ္ပုံတင္လို႔ရနိုင္မယ့္ Appျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ Telenor, MPT,Ooredoo,MecTelဆင္းမ္ကဒ္မ်ားအားလုံးမွတ္ပုံတင္လို႔နိုင္ပါတယ္။အဆင္မေျပတာေတြ ဒါမွမဟုတ္မိမိတို႔ရဲ့ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုေပးပို႔နိုင္ပါတယ္။==================@>>> Facebook <<<@==================https://www.facebook.com/Khun.Htetz.Naing==================@>>> Email <<<@==================khunhtetznaing@gmail.comကိုယ္တိုင္သုံးလို႔အဆင္ေျပလၽွင္မိမိတို႔ရဲ့မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္းဒီ App ကိုအသုံးျပဳၿပီး အြန္လိုင္းကေနတဆင့္ ဆင္းမ္ကဒ္ေတြကိုမွတ္ပုံတင္နိုင္ေၾကာင္း ေျပာဖို႔မေမ့ၾကနဲ႔ေနာ္ :)////////////////////////////////(Myanmar Unicode Font)မိမိတို့ရဲ့ဆင်းမ်ကဒ်များကိုအွန်လိုင်းကနေအလွယ်တကူမှတ်ပုံတင်လို့ရနိုင်မယ့် Appဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ Telenor, MPT, Ooredoo,MecTelဆင်းမ်ကဒ်များအားလုံးမှတ်ပုံတင်လို့နိုင်ပါတယ်။အဆင်မပြေတာတွေ ဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်များကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။==================@>>> Facebook <<<@==================https://www.facebook.com/Khun.Htetz.Naing==================@>>> Email <<<@==================khunhtetznaing@gmail.comကိုယ်တိုင်သုံးလို့အဆင်ပြေလျှင်မိမိတို့ရဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီ App ကိုအသုံးပြုပြီး အွန်လိုင်းကနေတဆင့် ဆင်းမ်ကဒ်တွေကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်ကြောင်း ပြောဖို့မမေ့ကြနဲ့နော် :)
PaOh Language Keyboard PaOh 2015 APK
မင်္ဂလာႏဒျာႏဩ. မင်္ဂလာပါ﻿ပအိုဝ်ႏလက်ကွက် ဇယားသည် မြန်မာလက်ကွက် နှင့် အများအားဖြင့်ဆင်တူပါသည်။ မြန်မာ ပအိုဝ်ႏယူနီကုဒ်သည် အက္ခရာတစ်ခုမှ ပုံသဏ္ဌာန်ကွဲပြားသော စာလုံးပုံ အမျိုးမျိုးကို ခလုတ်တစ်ခုတည် (ကုဒ်ရောထည့်သည် )ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရရစ် ( အကြီး အသေး အပြတ် )အမျိုးမျိုး မရှိပါ။ ကီးဘုတ်ပေါ်တွင် ရရစ်တခုသာ တွေ့ရပါမည်။ ထို့အတူတစ်ချောင်းငင် နှစ်ချောင်းငင် အရှည်ကိုလည်း တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံအတိုင်း ရိုက်နှိပ်သွားပါက လိုချင်သောစာလုံးပုံစံကို အလိုလျောက် ပြောင်းလဲ ပေးပါလိမ့်မည်။ ပအိုဝ်ႏစာလက်ရေးရေးသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း ရိုက်သွားရုံသာ ဖြစ်ပါသည်။ ပအိုဝ်ႏစာကိုရေးတတ်သူတိုင်း ဖုန်းထဲတွင် ရိုက်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည့် ယခု ၂၁ရာစုခေတ် နည်းပညာ ဖြစ်ပါသည်။PaOh Language Keyboard သည် AnySoftKeyboard နဲ့တွဲသုံးရပါမည်AnySoftKeyboard နဲ့မတွဲသုံးရင် ကီးဘုတ်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။AnySoftKeyboard နဲ့တွဲသုံးရပါမည် AnySoftKeyboard လင့်ဒေါင်းရန်နှိပ်ပါhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.menny.android.anysoftkeyboardကီးဘုတ်အသုံးရာတွင် စာလုံးအက္ခရာ အော်တိုပြောင်နေလို့အဆင်မပြေပါကကိုယ်တိုင်ပြန်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ် Keyboard Settings / SpecialDictionaries / Show Suggestions ကို Off ထားပေးရပါမယ်။ပအိုဝ်ႏ ယူနီကုဒ် ကီးဘုတ် ရိုက်ပုံရိုက်နည်းတဲင်းလိတ်လုဲင်ꩻ တဲင်းဗာႏနိုင်းမုဲင်ꩻက ကꩻ ကာ ကာꩻ ကား ကာႏခ ခꩻ ခါ ခါꩻ ခါး ခါႏမင်္ဂလာႏ = မ + င် +္+ လ +ာ+ ႏအုံဟဝ်နေး = အ +ု+ံ+ ဟ + ဝ +်+ န +ေ+ းကြောင်း = က +ြ+ေ+ာ + င် + းကမ္ဘာ = က + မ +္+ ဘ + ာမြှင့် = မ+ြ+ှ +င်+ ့မြန်မာ ရွှေပအိုဝ်ႏလူငယ်များအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။Khon Soe Zaw Thuခွန်းစိုးဇော်သူ နှင့် ပအိုဝ်ႏ IT လူငယ်များလွှတ်လပ်စွာအကြံပြုနိုင်ပါသည်။khonsoezawthu@hotmail.comဘလော့ paohdragonapp.blogspot.com
Reader (ေန႔စဥ္ဖတ္စရာမ်ား) 1.0 APK
#Zawgyiမဂၤလာပါ....မိတ္ေဆြReader Blog သည္ ၂၀၁၅၊ ၄လပိုင္းတြင္တည္ေထာင္သည္။ဗဟုသုတ/သုတ/ရသစာေပမ်ားဘဝအတြက္စာေပမ်ားႀကီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးသတင္းအခ်စ္ေရးရာနည္းလမ္း/ဗဟုသုတမ်ားကဗ်ာမ်ား စတဲ့စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာအေၾကာင္းအရာပို႔စ္မ်ားကို ေန႔စဥ္တင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။မည္သူမဆို အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာပို႔စ္မ်ားကိုေရးသားေပးပို႔နိုင္ပါတယ္။ၿပီးေတာ့ေဇာ္ဂ်ီ/ယူနီကုဒ္ႏွစ္မ်ိဳးဖတ္႐ူ႔နိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးထားပါတယ္။Reader (ေန႔စဥ္ဖတ္စရာမ်ား) App ကို၂၀၁၅၊ ၅လပိုင္းတြင္ Admin - Khun Myo Wai (Reader) မွပထမဆုံးဗားရွင္း 1.0 ကို Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ထုတ္ေဝေပးလိုက္ပါသည္။Reader Blog ႏွင့္ App အတြက္မည္သူမဆို အႀကံျပဳစာမ်ားလြတ္လပ္စြာေရးသားေပးပို႔နိုင္ပါသည္။#Unicodeမင်္ဂလာပါ....မိတ်ဆွေReader Blog သည် ၂၀၁၅၊ ၄လပိုင်းတွင်တည်ထောင်သည်။ဗဟုသုတ/သုတ/ရသစာပေများဘဝအတွက်စာပေများကြီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးသတင်းအချစ်ရေးရာနည်းလမ်း/ဗဟုသုတများကဗျာများ စတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအကြောင်းအရာပို့စ်များကို နေ့စဉ်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မည်သူမဆို အထက်ပါအကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သောပို့စ်များကိုရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဇော်ဂျီ/ယူနီကုဒ်နှစ်မျိုးဖတ်ရူ့နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်။Reader (နေ့စဉ်ဖတ်စရာများ) App ကို၂၀၁၅၊ ၅လပိုင်းတွင် Admin - Khun Myo Wai (Reader) မှပထမဆုံးဗားရှင်း 1.0 ကို Android ဖုန်းများအတွက်ထုတ်ဝေပေးလိုက်ပါသည်။Reader Blog နှင့် App အတွက်မည်သူမဆို အကြံပြုစာများလွတ်လပ်စွာရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ပအိုဝ်ႏလိတ်မွူး 1.0 APK
#Unicode=========ပအိုဝ်ႏလူမျိုးများအတွက် "ပအိုဝ်ႏလိတ်မွူး" App လေးကိုအမှားများစွာနဲ့ပထမဆုံး ဗားရှင်းကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။"ပအိုဝ်ႏလိတ်မွူး" App ကို ပအိုဝ်း IT လူငယ်များ မှပြန်လည်ရေးသားထုတ်ဝေပေးလိုက်တာပါ။ပအိုဝ်ႏစာပေကိုလေ့လာတတ်မြောက်လိုသူများ ဝယ်ယူရန်အဆင်မပြေသူများအတွက်အဓိကထားထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။အခြားလိုအပ်သူများလည်း မည်သူမဆို "အခမဲ့" ရယူနိုင်ပါတယ်။ပအိုဝ်ႏစာသည် မြန်မာစာတတ်မြောက်ထားသည့် ပအိုဝ်ႏလူမျိုးတိုင်းအလွယ်တကူလေ့လာတတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ယခုလို အိုင်တီခေတ် မှာမိမိတို့၏ပအိုဝ်ႏစာပေကိုဖုန်းထဲတွင်အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်ရန် Appအဖြစ်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုပထမဆုံးဗားရှင်းတွင် စာမျက်နှာ ၂၀ သာပါဝင်ပြီးနောက်ဗားရှင်းအသစ်တွင် ထပ်မံရေးသားထည့်သွင်းပေးသွားပါမည်။စာလုံးများကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားပါသဖြင့် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူများစာလုံးအမှားများတွေ့လျှင် Feedback ပေးကြပါ။ယခု "ပအိုဝ်ႏလိတ်မွူး" App နဲ့ပတ်သက်၍မိမိတို့၏ ထင်မြင်ချက်များဝေဖန်လိုသည့်အချက်များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည့်အတွက်အမှားများစွာရှိနိုင်ပါသည်။အမှားများတွေ့ပါကထောက်ပြပေးကြပါ။နောက်ဗားရှင်းအသစ်များတွင် အမှားများကိုပြင်ဆင်ရင်း ကျန်ရှိနေသေးသည့်စာမျက်နှာများကိုလည်း ထပ်မံထည့်သွင်းပေးသွားပါမည်။App Name ကိုယူနီကုဒ်ဖြင့်ရေးသားထားပါတယ်။ဇော်ဂျီအသုံးပြုသူများ အမှန်မြင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။အထဲကစာတွေကိုတော့ ဇော်ဂျီ/ယူနီကုဒ် အားလုံးမြင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပအိုဝ်ႏလူမျိုးများလည်းအားလုံးမြန်မာယူနီကုဒ်ကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ယူနီကုဒ်တွင် ကျွန်တော်တို့ပအိုဝ်ႏစာအပြင်အခြားမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏စာပေများလည်းပါဝင်ပါသေးသည်။Google Apps နှင့် Facebook တို့တွင်လည်းမြန်မာဘာသာဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ယူနီကုဒ်တွင်အခြားအားသာချက်များလည်းရှိပါသေးသည်။ယူနီကုဒ်အသုံးပြုလိုသူများ အောက်ပါနေရာများတွင် လာရောက်လေ့လာအကူညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။Blog: ပအိုဝ်း IT လူငယ်များ >>> http://paohityouth.blogspot.com/Facebook Page: ပအိုဝ်း it လူငယ်များ >>> https://www.facebook.com/paohityouthFacebook Groups: ပအိုဝ်ႏ it လူငယ်များ >>> https://www.facebook.com/groups/khunhtetznaing/Myanmar PaOh Unicode Area >>> https://www.facebook.com/groups/883761834978908/Myanmar Unicode Area >>> https://www.facebook.com/groups/mmUnicode/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#Zawgyiပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ "ပအိုဝ္းလိတ္မြဴး" App ေလးကိုအမွားမ်ားစြာနဲ႔ပထမဆုံး ဗားရွင္းကိုမၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္။"ပအိုဝ္းလိတ္မြဴး" App ကို ပအိုဝ္း IT လူငယ္မ်ား မွျပန္လည္ေရးသားထုတ္ေဝေပးလိုက္တာပါ။ပအိုဝ္းစာေပကိုေလ့လာတတ္ေျမာက္လိုသူမ်ား ဝယ္ယူရန္အဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္အဓိကထားထုတ္ေဝလိုက္ပါတယ္။အျခားလိုအပ္သူမ်ားလည္း မည္သူမဆို "အခမဲ့" ရယူနိုင္ပါတယ္။ပအိုဝ္းစာသည္ ျမန္မာစာတတ္ေျမာက္ထားသည့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတိုင္းအလြယ္တကူေလ့လာတတ္ေျမာက္နိုင္ပါတယ္။ယခုလို အိုင္တီေခတ္ မွာမိမိတို႔၏ပအိုဝ္းစာေပကိုဖုန္းထဲတြင္အလြယ္တကူေလ့လာနိုင္ရန္ Appအျဖစ္ျပဳလုပ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ယခုပထမဆုံးဗားရွင္းတြင္ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ သာပါဝင္ၿပီးေနာက္ဗားရွင္းအသစ္တြင္ ထပ္မံေရးသားထည့္သြင္းေပးသြားပါမည္။စာလုံးမ်ားကို ျပန္လည္ရိုက္ကူးထားပါသျဖင့္ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူမ်ားစာလုံးအမွားမ်ားေတြ႕လၽွင္ Feedback ေပးၾကပါ။ယခု "ပအိုဝ္းလိတ္မြဴး" App နဲ႔ပတ္သက္၍မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေဝဖန္လိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဝဖန္နိုင္ပါတယ္။ပထမဆုံးဗားရွင္းျဖစ္သည့္အတြက္အမွားမ်ားစြာရွိနိုင္ပါသည္။အမွားမ်ားေတြ႕ပါကေထာက္ျပေပးၾကပါ။ေနာက္ဗားရွင္းအသစ္မ်ားတြင္ အမွားမ်ားကိုျပင္ဆင္ရင္း က်န္ရွိေနေသးသည့္စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုလည္း ထပ္မံထည့္သြင္းေပးသြားပါမည္။App Name ကိုယူနီကုဒ္ျဖင့္ေရးသားထားပါတယ္။ေဇာ္ဂ်ီအသုံးျပဳသူမ်ား အမွန္ျမင္နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။အထဲကစာေတြကိုေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီ/ယူနီကုဒ္ အားလုံးျမင္နိုင္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္းအားလုံးျမန္မာယူနီကုဒ္ကိုအသုံးျပဳဖို႔အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ယူနီကုဒ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပအိုဝ္းစာအျပင္အျခားျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔၏စာေပမ်ားလည္းပါဝင္ပါေသးသည္။Google Apps ႏွင့္ Facebook တို႔တြင္လည္းျမန္မာဘာသာျဖင့္အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။ယူနီကုဒ္တြင္အျခားအားသာခ်က္မ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။ယူနီကုဒ္အသုံးျပဳလိုသူမ်ား ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ လာေရာက္ေလ့လာအကူညီေတာင္းနိုင္ပါတယ္။Facebook Page: ပအိုဝ္း it လူငယ္မ်ား >>> https://www.facebook.com/paohityouth
Dragon Uni Font Installer 1.2 APK
HUAWEI, HTC, Oppo, LG, Lenovo, i-mobile, ZTE,Sony, Acer, နှင့် Samsung မဟုတ်သောအခြား Android ဖုန်းဗားရှင်း 4.2.2မှ 5.0.1 အထိဖုန်းများကိုမြန်မာယူနီကုဒ်အမှန်သွင်းပေးနိုင်သော DragonUni Font Installer လေးပါ။ယခုဗားရှင်းသည် ဖုန်းအားလုံးနှင့် Error အနည်းဆုံး အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင် မွမ်းမံထားပါသည်။ ဤဖောင့်ချိန်းသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏မိခင် ဗမာစာ သာမက အခြားတိုင်းရင်းသား ပအိုဝ်ႏ၊ သျှမ်း၊ကရင်၊ စကောကရင်၊ ပိုးကရင်၊ ပလောင်၊ ကချင်၊ မွန်စာပေအားလုံးပါဝင်ပါသည်။အသုံးပြုလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့် လိုက်လုပ်ရပါမယ်။Dragon Uni Font Installer ကိုအသုံးပြုရန်သင့် Android ဖုန်းကို Rootဖောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။Dragon Uni Font Installer ကိုဖွင့်ပါ Check Root ကိုနှိပ်ပါ။ RootPermission တောင်းပါလိမ့်မည်။ Grant သို့မဟုတ် Allowဖြင့်လက်ခံလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Install Dragon Uni Fontဆိုတဲ့စာတန်းကိုနှိပ်ပါ။ ဖုန်းပိတ်ပြီးဖုန်းပြန်ဖွင့်လာရင်မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်လန်းနိုင်ပါပြီ။အချို့ Android ဖုန်းသည် BusyBox လိုအပ်ပါသည်။မလိုအပ်သောဖုန်းများကထည့်စရာမလိုပါ။ BusyBox ကိုလိုအပ်ပါကဖောင့်ချိန်းသည့်အခါ လိုအပ်ကြောင်းပြောပါလိမ့်မည်။ BusyBoxကိုအရင်ဖွင့်ပါ Install ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Root Permissionတောင်းပါလိမ့်မည်။ Grant သို့မဟုတ် Allow ဖြင့်လက်ခံလိုက်ပါ။အချိန်အနည်းငယ်စောင့်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင် Dragon Uni Font Installer ကိုဖွင့်ပါ Check Root ကိုနှိပ်ပါ။Root Permission တောင်းပါလိမ့်မည်။ Grant သို့မဟုတ် Allowဖြင့်လက်ခံလိုက်ပါ။ ပြီးရင် install MMUni Fontဆိုတဲ့စာတန်းကိုနှိပ်ပါ။ ဖုန်းပိတ်ပြီးဖုန်းပြန်ဖွင့်လာရင်မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်လန်းနိုင်ပါပြီ။စာရိုက်ဖို့အတွက် မြန်မာယူနီကုဒ်ကီးဘုတ်ကိုတော့ Play Store မှာ M3Keyboard(Myanmar) သို့မဟုတ် MUA Keyboard-ဗေကီးဘုတ် မိိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဒေါင်းယူပြီးရေးသားနိုင်ပါပြီ။ယခုဖောင့်ချိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွတ်လပ်စွာမေးမြန်းအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။Khon Soe Zaw Thu (Facebook >>> Khon Soe Zaw Thu = http://www.facebook.com/khay.jar.hwa)khonsoezawthu@hotmail.com(သို့မဟုတ်)Khun Htetz Naing (Facebook >>> Khun Htetz Naing =http://www.facebook.com/khun.htetz.naing)khunhtetznaing@gmail.comသို့လာရောက်မေမြန်း အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာယူနီကုဒ်အသုံးပြုထားသော ဂရုများသို့မိမိသိလိုသောအကြောင်းအရာများကို လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။သိသမျှကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေနိုင်ပါတယ်။MUA (Myanmar Unicode Area) >>> https://www.facebook.com/groups/mmUnicode/MPUA (Myanmar PaOh Unicode Area) >>> https://www.facebook.com/groups/883761834978908/PIY (PaOh IT Youth) >>>http;//www.facebook.com/paohitboys/အားလုံးအဆင်ပြေပျော်ရွင်နိုင်ကြပါစေMyanmar PaOh Unicode Area နှင့် ပအိုဝ်း IT လူငယ်များ
M3 Keyboard (Myanmar) 1.0.0 APK
မြန်မာစာ ယူနီကုတ် ကီးဘုတ်ပါ။ယခင် android version 4.4 အထက်ပဲ သုံးလို့ရအောင် ကန့်သက်ထားပေမယ့်Myanmar Unicode Area မှ android version 4.4 အောက်မှာပါယူနီကုဒ်သုံးနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နေသဖြင့် 4.0 အထက်ပါသုံးနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။(သို့သော် android version 4.4 အောက် ဖုန်းများတွင် သွင်းထားသောယူနီကုဒ်သည် ၁၀၀ ရာနှုန်း ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိသဖြင့် M3 Keyboard ၏အထူးလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကောင်းစွာ အသုံးချနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။)M3 Keyboard Settings ထဲမှာ အသုံးပြုနည်းနဲ့ အထူးလုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ယခင်သုံးနေကျ ဇော်ဂျီဖောင့် နဲ့ မြန်မာစာယူနီကုဒ်ဖောင့်ကိုအလွယ်တကူ ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ Unicode Converter application ကိုတစ်ခါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။မိမိပြောင်းလိုသော ဇော်ဂျီဖောင့် သို့မဟုတ် မြန်မာစာယူနီကုတ်ဖောင့်ကိုselect မှတ်ပြီး copy လုပ်လိုက်တာနဲ့ converter က အလိုလိုပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီ converter service ကို ပိတ်လို/ဖွင့်လိုလျှင် M3 Keyboard Settingsထဲရှိ Advanced Functions အောက်မှာ ၀င်ရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုကတော့ M3 Keyboard ကို သုံးခြင်းဖြင့်မြန်မာစာရိုက်ရာတွင် လက်ရေးမူ(မြန်မာစာ သက်ပုံ) အတိုင်းရိုက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ - သင်္ဘော = သ + င +်+္+ ​ေ + ဘ + ာနှစ်ချက်ထိစနစ်ကိုလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။shift နှိပ်ပြီးရိုက်ရမည့် စာလုံးများအား shift နှိပ်စရာမလိုပဲ၎င်းနေရာရှိ စလုံးကို နှစ်ချက်ထိရုံဖြင့် ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ဥပမာ - ဗ ပေါ်ရန် shift + ​ေ ရိုက်ရန်မလိုတော့ပဲ ​ေ ကို ၂ချက်ထိရုံဖြင့် ဗ ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။စာရိုက်ရာမှာ မကြာခဏ မှားတတ်လေ့ရှိတဲ့ စာကားလုံးများအားအလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ဥပမာ - စ + ျ နှင့် ဈ မှားခြင်းယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် တိုင်းရင်းသားစာပေများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိတွင် ရှမ်း၊ မွန်၊ ပအိုဝ်ႏ၊ သက္ကတ/ပါဠိ၊ ကယား၊ ကရင် တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး နောက်ထွက်မည့် ဗားရှင်းများတွင်လည်းထပ်တိုးပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ကီးဘုတ် ဒီဇိုင်းများ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။flat theme သုံးသူများအနေဖြင့် ကီးဘုတ်၏ နောက်ခံအ​ရောင်ကိုမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာအရောင်နှင့် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ပိုမိုရှင်းလင်းသော Setting အထားအသိုများဖြင့် key tone, vibrate,converter, typing method, keyboard height, key preview, font embed,keyboard language များကို အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်နိင်ပါသည်။landscape mode တွင်လည်း အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင် အခြားသော ပြုပြင်မှုများလည်းလုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Sulfur's Keyboard 2.1.0.20151121 APK
Android Gingerbread Keyboard withMyanmar(Zawgyi-one) Language- Simple Gingerbread Keyboard.- Lite Weight.- Zawgyi auto correction.- Suggestion for Myanmar Language.- Unicode 5.0+ Converting support.-9Keyboard Skins.- Emoji keyboard.- Absolutely FREE.- And more...
Zawgyi Font Changer For Myanmar App feature: - Need root andbusybox( thanks to RootTools Library ) - Beautiful myanmar font onandroid- Android 4.1.2 font error fix ( thanks to kyaw zaw naing )- Sonyandroid phone font error fix - 730 font error fix - Supportandroid2.3 up users
Type In Myanmar Keyboard 3.0 APK
Type In Myanmar Keyboard is to write all thecharacters in Myanmar when you typing in any social app such asgmail, whatsapp, or any other browsers.Myanmar Keyboard work asadefault keyboard in your phones ortablets. Here you can having option for type in English when youwant to used just switch to other language.How to set Myanmar Keyboard and its Features :1. To Set Enable Myanmar Keyboard with single touch windows.2. After that go to Switch option of Myanmar Keyboard.3. Using Images option you can set your image or photo inkeyboard background when its open for type in Myanmar.4. Theme option used for select best keyboard theme whateveryou like, simple choose out of them.5. Font option used for set font style according to yourselection in font keyboard.6. Setting options used for apply setting in your Myanmarkeyboard with various options.7. Help Provides you to guide how to write half character inType in Myanmar Keyboard.Customize Themes :=> You can set Portrait and landscape setting using customizetheme options.=> You can set keyboard transparency with0to 100 % scalingoptions using your phone size.=> You can set Background Color of your Myanmar Keyboard withvarious keyboard color options.=> You can also set Font color of your Myanmar Keyboard fontwith various Font Color.=> You can see all the setting in preview mode with its changesrelated to setting.Settings :=> General Setting apply with auto capitalizationfacility, Popup on Key press facility, Vibrate Facility on keypress, Suggestion on key press facility.=> Display Setting apply for set Landscape Key Height,set Portrait Key Height, set Suggestion Text Size.=> Font setting apply for Key Text Color, Preview TextColor.=> Sound Setting apply for sound on key pressfacility.Myanmar Keyboard isafree to used for type in Myanmar language forMyanmar understand people to make more used.To Enjoy Myanmar Keyboard with best features app and use smoothlyto type in Myanmar keyboard.
Myanmar Keyboard plugin 2.2 APK
Notes: -This keyboard encourage you to uses Unicode standardinsteadofZawgyi.http://my.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Font#Why_use_Unicode.3FIfyou need to use Zawgyi, Multiling O Keyboard now has an optiontoswitch (slide tool key) Myanmar script and dictionary pluginforMultiling O Keyboard. This is not an independent app,pleaseinstall OKeyboard along with this plugin. Instruction: ​ ⑴Installthis plugin and Multiling O Keyboard. ⑵ Run O Keyboard andfollowits setup guide. ⑶ Slide space bar to switch languages.Pleaseemail if you have any questions. Wikipedia: The Burmesescript(Burmese: မြန်မာအက္ခရာ; MLCTS: mranma akkha.ra; pronounced:[mjəmàʔɛʔkʰəjà]) is an abugida in the Brahmic family, used forwritingBurmese. It is an adaptation of the Old Mon script or thePyuscript. In recent decades, other alphabets using the Monscript,including Shan and Mon itself, have been restructuredaccording tothe standard of the now-dominant Burmese alphabet.Besides theBurmese language, the Burmese alphabet is also used fortheliturgical languages of Pali and Sanskrit. The charactersarerounded in appearance because the traditional palm leaves usedforwriting on withastylus would have been ripped bystraightlines. It is written from left to right and requires nospacesbetween words, although modern writing usually containsspacesafter each clause to enhance readability. The earliestevidence ofthe Burmese alphabet is dated to 1035, whileacastingmade in the18th century of an old stone inscription points to984. Burmesecalligraphy originally followedasquare format butthe cursiveformat took hold from the 17th century when popularwriting led tothe wider use of palm leaves and folded paper knownasparabaiks. The alphabet has undergone considerablemodificationto suit the evolving phonology of the Burmese language.There areseveral systems of transliteration into the Latinalphabet; forthis article, the MLC Transcription System is used.The Burmeselanguage (Burmese: မြန်မာဘာသာ pronounced: [mjəmàbàðà] MLCTS:myanma bhasa) is the official language of Burma.Burmese is thenative language of the Bamar and related sub-ethnicgroups of theBamar, as well as that of some ethnic minorities inBurma like theMon. Burmese is spoken by 32 million asafirstlanguage and as asecond language by 10 million, particularly ethnicminorities inBurma and those in neighboring countries. (AlthoughtheConstitution of Burma officially recognizes the English name ofthelanguage as the Myanmar language, most English speakerscontinueto refer to the language as Burmese.) Burmese is atonal,pitch-register, and syllable-timed language,largelymonosyllabic and analytic language, with asubject–object–verb wordorder. It isamember of the Tibeto-Burmangrouping of theSino-Tibetan language family. The language uses aBrahmic scriptcalled the Burmese script. Photo: Gray Lake by RomainGuy
MUA Keyboard - ဗေ ကီးဘုတ် APK
MUA Keyboard - ဗေ ကီးဘုတ် isakeyboard thatfollowed the standard of Unicode. Its output will follow standardof Unicode.org. It also followed the rule of Myanmar basic writingsystem. Some user ignore errors will be auto correct by thiskeyboard. Such as Asat + Dot below, U vowel + Asat, etc.★ MUA Keyboard is an Opensource keyboard. Anyone can get the sourcecode. ★https://github.com/sanlinnaing/MUA-KeyboardMain Features -* Mon, Shan, PaOh, Palaung, Karen (Sgaw, West Pwo, East Pwo), BamarKeyboards are supported. (Near future, more Myanmar Keyboards willbe added)* Myanmar Unicode output* Typing as we learn in childhood, "Thin Pone Gyi" andalso can type in "Logical Order" of Unicode sequencing* Double Tap fast typing* Delete Single character or One Word per DEL key base on cursorposition* Asat + Dot below sequences auto correct to Dot below + Asat* Other sequences auto correct* Get all functional of Myanmar UnicodeCautions -* If you have no Unicode compliant Fonts, you can't see output textcorrectly.* If your system font is Non-Unicode complaint fonts, you can't seeoutput text correctly.* Typing is in order of Thin Pone Gyi. So some inconvenience willface because it can't type in visual order.Welcome any inquiry and suggestions.Thank you.[Version History]V2.2 - Aug 8, 2016* Bug fixedV2.1 - Aug 7, 2016*Bug fixedV2.0 - Jun 30, 2015* Double Tap Fast Typing is add!* Some performance fixed* Some bugs fixedV1.4 - Mar 13, 2015* Eastern Pwo Karen Language is supported* Default Theme is modified to new look*2more keyboard themes can be choose.* Some major crashes fixedV1.3 - Feb 7, 2015* Sgaw Karen and Western Pwo Karen Languages are supported* Double Tap is supported for Only Karen* Some major crashes fixed* Popup and Double tap key label can see on key. It can also hideby user choice in setting Hint Key LabelV1.2 - Jan 17, 2015* Mon Language is supported* Emotion icons are added* Some major fixesV1.1 - Dec 31, 2014* Shan, Palaung, Pa-Oh Languages are supported* Some of auto correct for Shan Language* Add some of Myanmar auto correct* Some major fixes* Improve UI and themesV1.0 - Dec 17, 2014* Wow MUA ဗေ Keyboard is now at Play Store